Famaritana famolavolana Tokony ho Fantatry ny Mpamorona sary rehetra | Famoronana an-tserasera
Famaritana famolavolana Tokony ho Fantatry ny Mpamorona sary rehetra
Toy ny mahazatra amin'ny asa rehetra, voambolana Izay ampiasaina amin'ny sehatra iray dia matetika tsy takatry ny olona izay tsy ao anatiny. Toy izany matetika sarotra ho antsika ny manazava zavatra amin'ny teny hafa mba hahafahan'ny olona ivelany mahatakatra antsika sy mahafantatra izay tiana ho tratrarina sy izay ilaintsika mba hahatonga ny vokatra ho lavorary.
Raha mifantoka amin'ny faritra famolavolana, azo antoka fa efa henonao hoe inona ny zavakanto farany? Inona no maha samy hafa ny RGB sy CMYK? Inona avy ireo marika? Inona ny antontan-taratasy vector? Inona no mahasamihafa ny ranomainty mahazatra sy ny ranomainty?
1 Teny famolavolana sary tena ilaina
1.1 Art farany
1.2 CMYK- Loko efatra
1.3 Marika fanapahana
1.6 Ranomainty mivantana sy ranomainty
Teny famolavolana sary tena ilaina
Azo antoka fa efa nitranga taminao mihoatra ny indray mandeha izany, koa hiezaka izahay hanomboka a rakibolana famolavolana miaraka amin'ireo teny ampiasainay indrindra amin'ny fiainana isan'andro.
Raha mandefa hafatra amin'ny client izahay hilaza aminay raha mety ny kanto farany, ity midika fa efa vonona ny miraikitra ary tsy manaiky fiovana bebe kokoa izy, izany hoe tsy maintsy alefa amin'ny famokarana.
Ary raha mahita marika tsy fahita firy ianao sy toerana malalaka kokoa amin'ny manodidina, dia izao no marika ra sy marika tapaka ary tsy mila miahiahy momba izany ianao.
CMYK- Loko efatra
Ny rafitra fanontana dia mifototra amin'ny karazana ranomainty efatra, cyan, magenta, mavo ary mainty ary avy amin'izany no ahazoana ny loko sisa, ka ny mpamorona dia tsy miantso ireo ho CMYK, Ity dia rafitra ampiasaina amin'ny fanontana, ka ny art farany dia tokony ho eo anelanelan'ny rafitra.
Tadidio fa ireo sary avy amin'ny endrika nomerika ka ho ao amin'ny RGB izy ireo ary zava-dehibe ny fanovana ara-potoana ny fanovana.
Ireo dia tsipika kely ao amin'ny ràn'ny antontan-taratasy izay hametra ny haben'ny taratasy eo an-joro izy ireo, rehefa mikasa ny manamboatra ny guillotine izy ireo mba hahafahana manapaka ny endrika. Ireto marika ireto dia eo ivelan'ny sehatry ny famolavolana ka esorina aorian'ny fanontana.
Ireo no ilay fanafohezana mena, maitso ary manga, izany hoe mifototra amin'ireo ink telo ireo.
Ity dia rafitra ampiasain'ny efijery tv sy solosaina, ka raha hatao pirinty ny endrika dia tsy tokony hiankina amin'izay ho hita amin'ny solosaina ianao satria handalo fiovana ireo rehefa vita pirinty.
Tadidio foana fa ny mpiara-dia aminao indrindra dia ny fanandramana fanontana.
Zava-dehibe izany rehefa mila pejy iray isika loko hatramin'ny sisiny.
Zava-dehibe izany satria raha misy ny olana amin'ny fanapahana ny guillotine dia hiseho eo amin'ny pejy hatrany ny loko ary tsy hisy flakes manodidina azy. Ao amin'ireo rà mandriaka ireo no misy misy ny tsipika fanapahana.
Ranomainty mivantana sy ranomainty
Ity dia ranomainty izay efa nafangaron'ny mpanamboatra hahafahana mamokatra a loko na fiatraikany marina amin'ny fanontana.
Io dia ahafahanao mahazo antoka fa mampiasa ny lokon'ny orinasanao araka ny tokony izy ianao ary ny vokatra dia araka ny itiavanao azy. Tsara ny manonona izany mety miovaova ireo loko ireo arakaraka ny tonony na ny rafitra fanontana raha ovaina.
Ity dia teny be mpampiasa amin'ny famolavolana izay manondro ireo singa geometrika tsy miankina izay hatambatra mba hanao sary sy sary geometrika sarotra.
Miantso sary vongana manome antsika fahafaha-manao betsaka izy ireo rehefa te-hanova ny habeny na hanitsy ny sary izahay, satria zavatra mahaleo tena no anaovana azy ireo ka tsy voavily ary tsy hahavery ny kalitaony. Ity dia fomba tsara iray hahazoana antoka fa manana ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fanontana izy ireo.
Araka ny hitanao dia tsy mila miahiahy intsony ianao raha tsy takatr'izy ireo izay lazainao dia azonao omena azy ireo ny iray amin'ireny hevitra mba hahatakarany tsara anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Famaritana famolavolana Tokony ho Fantatry ny Mpamorona sary rehetra
Rafa villarraso dia hoy izy:
Salama Jorge, tena azo ampiharina ity lahatsoratra ity. Manomboka amin'ny sehatra aho ary hitako fa tena ilaina izany. Etsy ankilany, nahagaga ahy ihany ny nahita fa mpisandoka ianao. Nianatra ihany koa aho Architecture ara-teknika, na dia eo am-panaovana ny fivezivezena amin'ny asa aman-draharaha aza aho izao amin'ny famolavolana sary sy fanoharana, zavatra izay nahasarika ny saiko hatrany ary tiako ihany koa.
Misaotra hatrany amin'ny lahatsoratra sy ny arahaba.
Valiny tamin'i Rafa Villarraso
Jorge Neira dia hoy izy:
Misaotra anao nanaraka anay.
Valiny tamin'i Jorge Neira